Other Topics Personal Growth Upgrade Yourself
ဘဝက မာရသွန်ပြေးပွဲလိုပါပဲ။ ဘဝက တရားမမျှတဘူးလို့ သင် ခံစားမိကောင်း ခံစားမိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ထက် ပိုချမ်းသာကြွယ်ဝသူ၊ ပိုရုပ်ရည်ချောမောသူ၊ ပိုအောင်မြင်သူတွေ အများကြီးရှိနေကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ‘ကောင်းမွန်တဲ့’ ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့ သင်အနေနဲ့ ဘာတွေလုပ်နိုင်ပါသလဲ။ ထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့ တက္ကသိုလ်ကနေ ဘွဲ့ရတာက သင့်ကို ဩဇာအာဏာရှိတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်စေနိုင်လား၊ ဒါမှမဟုတ် မြေပိုင်သဘောမျိုး ထိတွေ့ကိုင်တွယ်လို့ရတဲ့ ဈေးကြီးပစ္စည်းတွေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်စေလား။ အမှန်တကယ်တော့ ‘ကောင်းမွန်တဲ့’ ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်တယ်ဆိုတာက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ တန်ဖိုးရှိမှုကို နားလည်တာနဲ့ ပိုပြီး သက်ဆိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရဲ့ တန်ဖိုးရှိမှုကို ဘယ်လိုတိုင်းတာမလဲဆိုတာက အဓိက ရှာဖွေသိရမယ့် မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။ အတိုချုပ်အားဖြင့် ကိုယ့်ဘဝကို ဘယ်လိုကောင်းအောင်နေလဲဆိုတာနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးရှိမှုကို တိုင်းတာကြပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ တန်ဖိုးရှိမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး တွေးတောတဲ့အခါ အောက်ပါအချက်တွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။
ပင်ကိုယ်အတိုင်းနေပါ၊ အများစုနောက်ကို မလိုက်ပါနဲ့
ကိုယ်က ဘယ်နေရာမှာ ထူးချွန်လဲဆိုတာကို ရှာဖွေပြီး စိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့ လေ့လာလိုက်စားပါ။ ကိုယ် ဘယ်နေရာရောက်နေတယ်ဆိုတာကို သိဖို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သုံးသပ်နိုင်မယ့်အချိန်ကို အမြဲထားပါ။ တင်းတိ်မရောင့်ရဲတာက ပိုကောင်းသလား၊ ရည်မှန်းချက်ကြီးတာက ပိုကောင်းသလားဆိုတာကို စဉ်းစားပါ။ မွေးနေ့၊ ဘွဲ့ယူတဲ့နေ့၊ မင်္ဂလာဆောင်နေ့လိုမျိုး နေ့ထူးနေ့မြတ်မှမဟုတ်ပါ၊ နေ့ရက်တိုင်းကို အဓိပ္ပါယ်ရှိအောင် နေပါ။
ရည်မှန်းချက်ရှိတဲ့ဘဝကို နေထိုင်ပါ၊ ကိုယ်တိုင်အတွက်ပဲ မစဉ်းစားပါနဲ့
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုခုနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးရှိမှုကို အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်မယ်ဆိုရင် လွယ်လွယ်နဲ့ ပျောက်ပျက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်အနေနဲ့ ရည်မှန်းချက်ရှိတဲ့ဘဝမှာနေထိုင်မယ် (လူ့ပတ်ဝန်းကျင် အတွက် အထောက်အကူပြုမယ်)ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးရှိမှုကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်မယ်ဆိုရင် ကိုယ်က အလုပ်များနေတဲ့အချိန်မှာတောင် ပိုခံနိုင်ရည်ရှိပြီး စိတ်အားထက်သန်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ တခြားသူတွေကို ကူညီပေးခြင်းက ကိုယ့်ရဲ့ အပြုသဘောဆောင်မှုနဲ့ ဘဝရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ရှာဖွေမှုကို တိုးတက်စေပါတယ်။
အရေးကြီးတဲ့အရည်အသွေးတွေကို တည်ဆောက်ယူပါ၊ ပိုက်ဆံရဖို့အတွက်ပဲ တွေးမပူပါနဲ့
‘ကိုယ်သိတဲ့အရာကိုပဲ မြင်နိုင်တယ်’ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးတစ်ခုရှိပါတယ်။ ကိုယ့်နေ့စဉ်ဘဝရဲ့ တစိတ်တပိုင်း အနေနဲ့ အသစ်သစ်သောအရာတွေကို သင်ယူဖို့ ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီးအကြောင်းကို ပိုပြီး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်နားလည်လာလေလေ၊ ဘဝရဲ့ အခြေအနေအမျိုးမျိုးမှာ ပိုပြီးလွယ်လွယ်ကူကူ လိုက်လျောညီထွေနေထိုင်နိုင်လေလေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်က သင့်အလုပ်ရဲ့ ကနဦးအဆင့်တွေမှာ အရေးပါပါတယ်။ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုရှိစွာတွေးတတ်ခြင်း၊ ပရောဂျက်တွေကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်ခြင်း၊ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းခြင်းစတဲ့ အရေးကြီးတဲ့အရည်အသွေးတွေကို သင်ယူဖို့၊ တည်ဆောက် ဖို့ကို ဦးစားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ကိုယ့်တန်ဖိုးကို နားလည်ခြင်းက ကိုယ့်ရည်မှန်းချက်ကိုမြင်စေနိုင်ပြီး ဘဝမှာ ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ လုပ်ကိုင်နို်ငပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် ဘဝနောက်ဆုံးနေဝင်ချိန်တွင် နောင်တမရှိတဲ့ ဘဝရဲ့အမှတ်ရစရာတွေကို ပို်ငဆိုင်ပါလိမ့်မယ်။
Life is likeamarathon. You may feel that life is unfair. There are many who are richer, more attractive and more successful than you. Then, what can you do to havea“good” life? Would it helps that you graduate fromatop-ranking university, areahigh-powered professional or have tangible expensive items such asalanded property? In fact, havinga“good” life is more to be with understanding of your self-worth. So, the question to explore is “How to measure your self-worth?”. In brief, self-worth is measured by how well you live your life. You may consider the following pointers while thinking about your self-worth.
- Be Original: do not just follow the crowd
Find what you are good at and pursue it withahunger and passion. Always find time for self-reflection, and know where you stand. Consider about whether it is better to be content or be more ambitious. Make every single day count, not just the special occasions like birthday, graduation day, or wedding.
- Liveamission-driven life: do not just think about yourself
When you define yourself (self-worth) in terms of personal gain, you will lose sight easily. When you define yourself to liveamission-driven life (contribute to society), you will be more resilient and energetic even when you are busy. Helping others improves your positivity and finding purpose in life.
- Build core skillsets: do not worry about making money
There isasaying as, “You can only see that which you know”. You should try to make leaning something new as part of your daily routine. The broader understanding of world, the more your can easily adapt the various situations in life. This aspect is particularly in important at the early stage of your career; you need to prioritize learning and building core skillsets such as critical thinking, project management, communication.
Understanding of self-worth helps you to see what you can aim for, and what you really can do better in life. In this way, on your deathbed you have nothing but the memories fromalife already lived with no regrets.